Xukuumadda Oo Laga Doonayo Inay Soo Qabato Nin Hargeysa Ku Dilay Nin Kale | Dhamays Media Group
Xukuumadda Oo Laga Doonayo Inay Soo Qabato Nin Hargeysa Ku Dilay Nin Kale
Hargeysa (Dhamays) – Qaar ka mid ah Madax-dhaqameedka Beesha Subeer Awal, ayaa markii u horeysay ka hadlay Dil Magaalada Hargeysa toddobaadkii hore loogu geystay Marxuum Magaciisu ahaa Aadan Faarax Sareeye oo uu Nin Madaxa soo duubtay ku dhex toogtay Meherad Farmasiiya oo uu ku haystay Xaafadda Xero-Awr.
Madax-dhaqameedka oo Maanta Shir-jaraa’id si wada-jir ah ugu qabtay Hargeysa, ayaa ku baaqay in Hay’adaha Ammaanku deg-deg u soo qabtaan Gacann-ku-dhiiglihii Dilay Marxuumka, kaasi oo ay sheegeen inuu Hargeysa ku sugan yahay, wallow ay sheegeen in Beeshiisa uu ka dhashay aqbashay inay Dilka uu geystay qabaan.
Suldaan Jaamac Aadan, oo ugu horeyn halkaa ka hadlay, ayaa yidhi, “Waxaanu Cambaareynaynaa Dilkii loo geystay Ninkii Dhakhtarka ahaa ee Meheraddiisa joogay. Waxaanu leenahay Ciddii Dilkaa geysatay ha loo soo qabto, Waayo? Dawlad baynu nahay oo Boolis baa jira, Wasaaraddii Amnigaa jirta, hay’adihii Dambi-baadhistaa jira, laakiin ilaa hadda lama hayo (Gacan ku dhiiglihii).”
Suldaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cali, ayaa isaguna sheegay in Dilka Marxuum Aadan Faarax Sareeye uu yahay wax ku cusub Hargeysa, “Meesha waxa ka dhacay fal xun, oo aan ahayn falalkii la arki jiray. Marxuumka dhintay digniin buu hore u bixiyey, Hay’adaha Amniguna way ogaayeen. Imikana Ninkii Qofka dilay ee Gacan-ku-dhiiglaha ahaa Magaalada ayuu ku jiraa, Reerkii uu ka dhashayna waxay qaateen inay hawshan (Dilkan) qabaan oo qoraal bay sameeyeen. Iyaga waxaanu leenahay si aan dhib kale u imanin hawshii aad qaadateen sideedii uga soo baxa. Hay’adaha Amnigana waxaanu leenahay in Amnigu dan-buu inoo wada yahay, in la wada ilaaliyaa waa inoo wada dan, falkan oo kale marka uu dhacana waxa laga hor-tagaa inaan wax kale dhicin, halkaana waanu dhaliileynaa, ee Ninkii Dilka geystay si deg-deg ah ha loo soo qabto.”ayuu yidhi.
Boqor Maxamed Geelle Seed, oo ayaa sheegay in haddaan Ninka Dilka geystay la soo qabanin ay keeni karto dhibaato kale oo saamaysa Ammaanka guud ee Dalka, waxaanu yidhi, “Falka Hargeysa ka dhacay Somaliland wax hore uga dhici jiray muu ahayn. In Nin Meheraddiisa lagu dhex dilaa waa Shaqadii lagu bilaabi jiray in Nabadgalyada lagu baa’biiyo. Haddaanay Tallaabo Adag qaadin (Ciidammada Amnigu) oo aanay Ninkaa soo qabanin, mid, laba iyo Saddex midna noqon mayso ee waxay noqon doontaa in la is-ugaadhsado, markaa Booliisku hurdada haka kacaan.”
Suldaan Ibraahim Suldaan Sulub, oo ka mid ah Madax-dhaqameedka Shirka Jaraa’id ka hadlay, ayaa tilmaamay in Ninka Dilka geystay uu weli ku sugan yahay Hargeysa, “Marka hore Tacsi baan u dirayaa Marxuumkii Meheraddiisa lagu dilay ee Magaciisu ahaa Aadan Faarax Sareeye. Booliiska waxaanu ka codsanaynaa inay gacanta ku soo dhigaan Gacan-ku-dhiiglihii Dilkaa geystay oo Magaalada Hargeysa lagu sheegayo”ayuu yidhi.
Suldaan Ismaaciil Geelle, ayaa isaguna dhaliilay Hay’adaha Ammaanku oo uu sheegay inay ka gaabiyeen Wax ka qabashada Ninka Dilka geystay, “Waxaanu leenahay Hay’adaha Amnigu arrinkaa si deg-deg ah ha uga hawl-galaan, Hay’adaha amniga waanu dhaliilaynaa shaqadooda, waayo? Way ka raageen Arrinkaa.”ayuu yidhi.
Previous: Xisbiga KULMIYE Oo Daneynaya Garabka Jamaal Cali Xuseen Ee UCID Ka Quustay
Next: Sarkaal Katirsan Xisbiga WADDANI Oo Qoyskii Marxuumkii Dhawaan Jeelka Isku Dhex Deldelay Kula Taliyey Inay Dacweeyaan Wasiirka Caddaaladda Iyo Taliyaha Asluuubta